महिलाको वेदना ठूलो कुरो ठानिन्न- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जय बागेश्वरीको मौलिकता मासिँदै
फाल्गुन ११, २०७५ दामोदर न्यौपाने
काठमाडौँ — जय बागेश्वरीको पहिचान माटो हो । मन्दिरको भित्ताको जडान माटोको छ । मूर्ति माटाकै छन् । अब यसको निर्माण भने मौलिकता मासिने गरी हुने भएको छ । भुइँचालोले क्षतिग्रस्त यो मन्दिर जगैसम्म भत्काउनुपर्ने भएको छ ।
‘यो माटोले बनेको हो,’ पशुपति क्षेत्रका संस्कृतिका ज्ञाता मुकुन्दराज वैद्य भन्छन्, ‘यसको प्राचीनता, मौलिकपन जोगाउन माटोले नै बनाउनुपर्छ । तरकोषले चुना सुर्कीले बनाउने गरी इस्टिमेट गरेको छ ।’
कोषले मन्दिर निर्माणका लागि तुलसी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौतासमेत गरिसकेको छ । कोषका सदस्यसचिव प्रदीप ढकालका अनुसार ३ करोड १४ लाख रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको हो । कोषका योजना महाशाखा प्रमुख भरत मरासैनीले चुना सुर्कीको जडान प्रयोग गरेर निर्माण हुन लागेको र यसका लागि पुरातत्त्व विभागले अनुमति दिएको उनले बताए । ‘चुना सुर्की नै प्रयोग गर्न लागेका छौं,’ मरासैनी भन्छन्, ‘यहाँ सबै कामका लागि पुरातत्त्वको अनुमति लिएका छौं ।’
पुरातत्त्व विभाग विश्व सम्पदा शाखाले पनि चुना सुर्की प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको जनाएको छ । ‘चुना सुर्कीलाई पनि प्राचीन निर्माण सामग्री मानिएको छ,’ विश्व सम्पदा शाखाका प्रमुख सुरज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ठेक्काबाट काम गर्दा माटोको जडान राख्दा असम्भव देखिएकाले यसअघि नै माटोको साटो चुना सुर्की प्रयोग गर्न अनुमति दिने गरिएको हो ।’
माटो पनि जहाँ पायो त्यहींको प्रयोग गरेर हुँदैन । त्यहाँ प्रयोग भएको जस्तो माटो कहाँ पाइन्छ र कति खर्च लाग्ने अनुमानै गर्न नसकिने भएकाले यो सम्भव नहुने श्रेष्ठ बताउँछन् । पुरातत्त्वको यो मान्यता संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत हुने संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।
‘संरक्षण भनेको जे थियो त्यही, जस्तो थियो त्यस्तै हो,’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वकोषाध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश ३ का सभासद नरोत्तम वैद्य भन्छन्, ‘यो मन्दिर पहेंलो माटोले बनेको हो । यही माटोले बनाइएन भने यहाँको मौलिकता मासिन्छ । यसमा कोषलेध्यान दिनैपर्छ ।’
माटो खोज्न कठिन भए पनि असम्भव भने नहुने मुकुन्दराज बताउँछन् । ‘खेतमा गहिरो खनेपछि यहाँ प्रयोग भएको जस्तो माटो पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि मिहिनेत त गर्नै पर्‍यो नि । खेतमा २०/२५ हात गहिरोमा खन्यो भने राम्रो माटो आउँछ ।’ त्यति गहिरोमा गएपछि रङ रङका माटो आउने उनी बताउँछन् । वैद्यका अनुसार यहाँ प्रयोग हुने माटो लेलेबाट ल्याइन्थ्यो ।
माटोबाट निर्माण सम्भव छ भनेर आफूहरू अध्ययन गर्न काष्ठमण्डपमा पनि गएको वैद्यले बताए । सातौं शताब्दीमा बनेको काष्ठमण्डप माटोबाटै बनाइएको छ । त्यहाँ कस्तो माटो प्रयोग भएको थियो भनेर प्रयोगशालामा परीक्षणसमेत गरिएको थियो । त्यसबाट तीन किसिमको माटो प्रयोग भएको पाइएको थियो । यहाँ प्रयोग भएको जस्तो माटो ताहाचलमा पाइएको थियो । ‘काष्ठमण्डपमा माटो प्रयोग भयो भने यहाँ किन गर्न सकिँदैन ?’ वैद्य प्रश्न गर्छन्, ‘हामीले पनि माटोबाटै बनाउनुपर्छ । नत्र यसको मौलिकता रहँदैन ।’
प्राविधिकले यहाँ प्रयोग भएको माटो पनि प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् । ‘माटोको कुनै आयु हुँदैन । यो जहिले पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेका छन् यहींका प्राविधिकले,’ जयबागेश्वरी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष छत्रानन्द वैद्य भन्छन्, ‘भत्काउँदा खेर नजाने गरी माटो संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भनेर प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिन्छ । आधा माटो मात्रै काम लाग्यो भने पनि धेरै खर्च कम हुन्छ । विकल्प सोच्दै नसोची कोषले सजिलोको लागि चुना सुर्की प्रयोग गर्न भनेको छ । सजिलैकै लागि विभागले पनि कोषको माग पूरा गरिदिएको छ । यसो गरियो भने यहाँको मौलिकता कहाँ रह्यो र ? यसो गर्नुहुँदैन भनेर हामीले विरोध गरिराखेका छौं । तर कोषले कुरा सुनेको छैन ।’
जयबागेश्वरीको पादपीठमा लिच्छविकालीन भएको प्रमाण फेला परेको छ । माथिल्लो भागमा भने हरेक १२ वर्षमा कलेबर फेर्ने चलन छ । यो बेला मूर्तिदेखि मन्दिरका बाहिर भाग रङरोगन गर्न, बुटा फेर्नेलगायतका काम गरिन्छ । पशुपति क्षेत्रको भण्डारखाल छेउकै नवाली टोलमा पर्छ जयबागेश्वरी ।
पशुपति क्षेत्रका ९ वटा टोलमध्ये एउटा हो नवाली । पशुपति क्षेत्र ९ वटा ग्रह संयोजन मिलेर बनेको छ । पशुपति क्षेक्र ९ ढोका, ९ डबली, ९ इनार, ९ धारा, ९ शत्तिपीठ, ९ चोक, ९ चौर र ९ जात, ९ टोल मिलेर बनेको छ पाशुपात क्षेत्र । यसलाई ९ गुणा ९ (८१) ग्रहको संयोजन भनिन्छ ।
नेपालको पहिलो वंश गोपालवंशको राजधानी यही क्षेत्रलाई मानिएको छ । देवपाल राजाले शासन गरेको हुनाले यो ठाउँलाई देवपतनसमेत भनिन्छ । यस क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काम यही ९ जातले गर्दै आएका छन् । नेवारी भाषामा देवपाटलाई ‘ग्वल’ भनिन्छ । राजभण्डारीको अनुसार ग्वलको अर्थ ९ गुणा ९ को संयोजन हो ।
राजोपाध्याय, कर्मचार्य, जोशी, राजभण्डारी, कपाली, वैद्य, डंगोल, खड्गी र देउला जाति मिलेर यो क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । यी जातिले यहाँ जन्मदेखि मरणसम्मका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन् देवपाटनमा । ९ ग्रहको संयोजन अहिले बिग्रेको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यहाँकोबस्ती उठाइदिएपछि ९ टोल अब रहेन । ९ टोलमध्ये ५ टोल उठाइयो । अब चार टोल मात्रै बाँकी छन् । नवाली टोल, इतापाखा टोल, पाँचु टोल, भकुन टोल, करे टोल, लगानलाछी टोल, मतमडिल टोल र दथु टोल मिलेर बसेका थिए ।
यी टोलैपिच्छै बेग्लाबेग्लै जातको बसोबास थियो । राजोपाध्य, भण्डारी, वैद्य, शाक्य, श्रेष्ठ, डंगोल, मानन्धर, कसाई, नापित, संघ, गाइने, कुसुले, पोडेलगायतका जाति पशुपति क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् । यहाँ नेवार जातिको चारै वर्णको बसोबास थियो ।
यी टोलमा अलग अलग जातिको बसोबास थियो । राजोपाध्य र वैद्यको थलो दथु टोल हो । शाक्यहरू नवाली टोलमा बस्छन् । डंगोलको बसोबास लगनलाछी टोलमा र भगु टोल हो । भण्डारीको टोल दथु टोल पाँचु टोल र मतण्डी टोल हो ।
गाइने र कसाई करे टोलमा, कुसुले लगानलाछी टोल र भकुन टोलमा छरिएर रहेका थिए । पोडेको बसोबास पहिला इतापाखा टोलमा थियो । पछि उनीहरूलाई यहाँबाट अन्यत्र सारिएको थियो । उनीहरूलाई १९४५ सालमा इतापाखाबाट गौचरनमा सारिएको थियो ।
पशुपतिका मुख्य शक्तिपीठमध्येमा पर्छ जयबागेश्वरी । मूर्त मात्रै नभई यहाँ थुप्रै अमूर्त सम्पदा पनि छन् । तीमध्ये नवदुर्गा नाच मुख्य हो । जयबागेश्वरीलाई नवदुर्गाको मितिनीका रूपमा पनि लिइन्छ । त्यही भएर भक्तपुरका देवगण नवदुर्गा नाच लिएर जयबागेश्वरी जाने गर्छन् ।
यहाँ साउन, मंसिर र चैतमा रागो बलि दिइन्छ । पुस र माघमा देवीलाई आगो तपाइन्छ । असारमा त्रिशूल जात्रा देखाइन्छ । ‘पुनर्निर्माण गर्दा यी सबै अमूर्त पक्षलाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ,’ वैद्य भन्छन्, ‘सम्पदा निर्माण भनेको भौतिक निर्माण मात्र होइन, यहाँका अमूर्त पक्षलाई पनि ध्यान दिइनुपर्छ ।’
अरु शक्तिपीठ पशुपति क्षेत्रभित्रै पर्छन् । जयबागेश्वरी अर्को शक्तिपीठ पिंगलास्थान भने चक्रपथ बनेपछि क्षेत्र बाहिर पर्‍यो । पिंगलास्थान पुलमुनि परेको छ । यहाँ सयौंले नाघेर हिँड्छन् । जयबागेश्वरीचाहिं सडक पारितिर पर्‍यो । दिनहुँ गुड्ने गाडीले गर्दा यो थर्किराखेको हुन्छ । ‘यति प्राचीन मन्दिरको छेउबाट गाडी गुडाइएको छ । यसले गर्दा पनि यसको आयु छोटिँदै गयो,’ मन्दिरमा कलेबर फेर्दै आएका राजेन्द्र चित्रकार भन्छन्, ‘यो सम्पदामाथि भएको ज्यादती हो ।’
मन्दिर चारपाटे मण्डप शैलीको छ । यहाँको पुजाको थालनी लिच्छवीकालीन राजा शिवदेवको पालादेखि शुरु भएको मानिन्छ । भाषा वंशावलीका अनुसार मानसरोवरबाट तिला नदी तरेर आई जयबागेश्वरी भएको उल्लेख छ ।
गर्भगृहको बीचमा जयबागेश्वरी, दायाँतर्फ श्वेतभैरव र बायाँतिर गणेशका मूर्ति छन् । गणेश सुँड नभएको छ । सुँड नुहुनेको अर्थ महादेवले गणेशको टाउको काट्नुअघिकै भएको वैद्य बताउँछन् ।
‘यहाँ के–के छन् के–के,’ वैद्य भन्छन्, ‘खोज्नुपर्ने धेरै छन् यहाँ । त्यही भएर यसलाई हचुवामा लिनु हुँदैन ।’ कुनै बेला सती जाने महिलाको गहना यही मन्दिरमा चढाउने गरिएका जयबागेश्वरीलाई धनी मन्दिरको रूपमा समेत लिइने गरिएको पशुपतिका भण्डारी केदारमान भण्डारी बताउँछन् । तर यहाँ चढाइएका गहनाको कुनै अभिलेख भने छैन ।
‘अभिलेख राख्ने काम कोषको हो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर कोष नै संवेदनशील देखिएको छैन ।’ इतिहासकार डा. गोपाल शिवाकोटीका अनुसार यसको भण्डार राजा जयप्रकाश मल्ल र नृपेन्द्र मल्लले रित्याएका हुन् । पटकपटक विवादका कारण यसको निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन ।
भुइँचालो जानासाथ निर्माणको जिम्मा एडभेन्चर टुर एन्ड टुर ट्राभललाई दिइएको थियो । त्यसका सञ्चालक कल्याण शर्माले कंक्रिट प्रयोग गरेपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेका थिए । काम सुरु नभएपछि गत वर्ष कोषले सम्झौता खारेज गरेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७५ ०७:५३